Product Factory | Mpanamboatra, mpamatsy akora China
Ny fampahalalana fototra dia arovy ny fomba fijerinao amin'ny alàlan'ny kailinao sy ny dobo filomanosana ary tsy hanelingelina amin'ny rafitry ny Railing Glass. Fitaovana / fitotoana fitaratra feno amin'ny alàlan'ny baomba lava, na ao anaty trano na ivelany, mametraka rafitra fitaterana vera vera dia fomba azo antoka hahatratrarana sy hitondrana hevitra amin'ny fiainanao. Endri-javatra 1) Ny alàlan'ny alàlan'ny famandrihana hafahafa aorina dia manolotra fijerena ankehitriny ary trompetra izay rafi-pitaterana deck hafa ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ho an'ny olona maro, ny dian-dramatoa fitaratra vera dia consi ...
Fampahalalana fototra Yongyu Glass, mpikambana amn'ny mpivarotra US Ice Rink Association, dia nanondrana ny SGCC mankasitraka ny 1/2 "sy ny 5/8" vokatra fitaratra azo avy amin'ny indostrian-dranomandry any Etazonia nanomboka tamin'ny taona 2009. Izahay dia manondrana kalitao avo lenta sy lafo vidy. Vokatra fitaratra goavambe amin'ny mpanjifantsika ary mizara ny tombony amin'ny varotra. Tombontsoa hafa Ny rafitry ny fitaratra rink ranomandry dia ampiasaina amin'ny laoniny mba hiarovana ny mpihaino ao ambadika. Ny tanjaky ny ranomandry rink tempered dia manisy tanjona maro, ao anatin'izany: 1) Fiarovana ...
Fizarana fitaratra fiarovana
Fampahalalana fototra Ny rindrina fisarahana fitarihan'ny rindrina dia vita amin'ny fitaratra misy vera / laminated / panel an'ny IGU, mazàna ny hatevin'ny fitaratra dia 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Misy karazan-jiro hafa matetika ampiasaina ho fisarahana, ho an'ny fisarahana fitaratra vera, fanontana fitaratra vita amin'ny lamba vita amin'ny vera, fisarahana fitaratra, fisarahana fitaratra, fisarahana vera laminated, fisarahana fitaratra. Fisarahana fitaratra no ampiasaina amin'ny biraon'ny birao, trano sy fivarotana.10mm mazava fisarahana fitaratra vera dia in-5 stro ...